कोरियामा प्रवासी श्रमिकको औधोगिक सुरक्षा किन खतराको संकेतमा छ ? – korea pati
कोरियामा प्रवासी श्रमिकको औधोगिक सुरक्षा किन खतराको संकेतमा छ ?
May 18, 2020 Korea patiLeaveaComment on कोरियामा प्रवासी श्रमिकको औधोगिक सुरक्षा किन खतराको संकेतमा छ ?
कोरियामा प्रवासी श्रमिक को औद्योगिक सुरक्षा जहिले पनि खतराको सङकेत मा पर्दै आएको छ । प्रत्येक बर्ष औद्योगिक दुर्घटना दर बढि नै रहेको छ । सन २०१७ सालको आधारमा कुल कोरियन श्रमिक को औद्योगिक दुर्घटना हुने दर o.१८% र प्रवासी श्रमिक को औद्योगिक दुर्घटना हुने दर १.१६% छ जुन ६ गुणा ले बढि हो । औद्योगिक दुर्घटना मा प्रवासी श्रमिकको मृत्युदर ४ गुणा बढि पाईएको छ ।
कोरियन श्रमिकको औद्योगिक दुर्घटना दर घटदो क्रममा छ भने प्रवासी श्रमिक को औद्योगिक दुर्घटना दर बढदो क्रममा छ । सन २०१४ देखी सन २०१८ को अवधिमा प्रवासी श्रमिक को औद्योगिक दुर्घटना ६,१२९ जना बाट बृद्धि भएर ७,३७५ जना पुगेको छ्। औद्योगिक दुर्घटना मा मृत्यु हुने प्रवासी श्रमिक को सङ्ख्या पनि
८५ जना बाट बृद्धि भएर १३६ जना पुगेको छ ।निर्माण क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र मा धेरै मृत्यु हुने गरेको छ । औद्योगिक दुर्घटना को रुपमा दर्ता नभएको केस खारेज भएको सङ्ख्या गणना गरेमा प्रवासी श्रमिक को वास्तविक औद्योगिक दुर्घटना दर तथा औद्योगिक दुर्घटना मृत्यु दर भने अझ बढि हुने अनुमान छ । सन २०१३ मा औद्योगिक दुर्घटना मा पर्ने प्रवासी श्रमिक को सङ्ख्या ५,५८६ जना रहेको थियो ।औद्योगिक दुर्घटना मा परेर ज्यान गुमाउने प्रवासी श्रमिक को सङ्ख्या ८८ जना रहेको थियो । सन २०१४ मा औद्योगिक दुर्घटना मा पर्ने प्रवासी श्रमिक को सङ्ख्या ६,०४४ जना रहेको मा औद्योगिक दुर्घटना मा ज्यान गुमाउने प्रवासी श्रमिक को सङ्ख्या ८५ जना रहेको थियो ।
सन २०१५ मा औद्योगिक दुर्घटना को सिकार हुने प्रवासी श्रमिक को सङ्ख्या ६,४४९ जना रहेको मा औद्योगिक दुर्घटना मा ज्यान गुमाउने को कुल सङ्ख्या १०३ जना रहेको छ । सन २०१६ मा औद्योगिक दुर्घटना मा पर्ने कुल प्रवासी श्रमिक को सङख्या ६,७२८ जना रहेको मा औद्योगिक दुर्घटना मा ज्यान गुमाउने को कुल सङ्ख्या ८८ जना रहेको थियो । २०१७ मा औद्योगिक दुर्घटना मा पर्ने प्रवासी श्रमिक को सङ्ख्या ६,४०२ जना रहेको छ । १०७ जना ले सन २०१७ मा औद्योगिक दुर्घटना मा परेर ज्यान गुमाएका थिए ।सन२०१८ औद्योगिक दुर्घटना मा पर्ने प्रवासी श्रमिक को सङ्ख्या ७,२३९ जना र ज्यान गुमाउने को सङ्ख्या १३६ जना रहेको छ ।
सन २०१३ यता सन २०१८ सम्म औद्योगिक दुर्घटना मा पर्ने प्रवासी श्रमिक को सङ्ख्या ३८४४८ जना रहेको मा औद्योगिक दुर्घटना मा ज्यान गुमाउने को सङ्ख्या ६०७ जना रहेको छ ।प्रवासी श्रमिक मध्ये ७०% जति ३० जना भन्दा कम कामदार हुने कम्पनी मा काम गर्छन । यस्ता साना तथा मध्यस्थर को कम्पनी को उपकरण एकदम पुराना हुने हुदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढि हुन्छ । कम्पनी मालिकले सुरक्षा साधनमा लगानि नगर्ने अथवा धेरै काम लगाउन को लागी सुरक्षा सम्बन्धी साधन बन्द गर्ने पनि गरेका छ्न यसका साथै प्रवासी श्रमिक लाई दिइने सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा पनि औपचारिक मात्र छ । प्रवासी श्रमिक प्राय लामो समय काम गर्ने र रातको काम गर्ने सिल सिला धेरै भएका ले खतरा मा पर्ने सम्भावना बढि हुन्छ ।
त्यसकारण विधिवत् रुपमा प्रवासी श्रमिक को औद्योगिक दुर्घटना रोक्न बलियो निति बनाईनु पर्छ । कोरिया भित्रीनु अघि र भित्रि सकेपछि सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा दिनु पर्छ ।कम्पनी भित्र दिने शिक्षा मा पनि औद्योगिक दुर्घटना रोकथाम गर्ने शिक्षा अनिवार्य गरिनु पर्छ । पुराना उपकरण तथा सुरक्षा उपकरण मा सुधार अनिवार्य सुधार गर्नु पर्छ । यसरी औद्योगिक दुर्घटना मा पर्ने कम्पनी मालिकलाई कडा भन्दा कडा दण्ड सजाय दिनु पर्छ र सुरक्षा मा बढि जोड दिन लगाउनु पर्छ ।
प्रवासी श्रमिक आफैले पनि खतरायुक्त उपकरण चलाउदा या काम गर्दा सुरक्षा प्रकृया पुरागरिदिनुहोस भन्न जरुरी छ । औद्योगिक दुर्घटना रोकथाम शिक्षा नियमित रुपमा सन्चालन गर्न आग्रह गर्न जरुरी छ । कोरिया औद्योगिक दुर्घटना हुदा प्राय सबै जसो रोजगारदाताले प्रवासी श्रमिक लाई अनेक डर त्रास देखाएर औद्योगिक दुर्घटना लुकाउने गरेका छन । औद्योगिक दुर्घटना हुदा औद्योगिक दुर्घटना बिमा बाट उपचार नगराएर आफ्नै निजि खर्च बाट उपचार गराउने तथा प्रवासी श्रमिक आफै लाई व्यहोर्न लगाउने गरेका छन । यदि कार्यस्थल मा औद्योगिक दुर्घटना भए मा र रोजगार दाताले सहयोग नगरेको खण्डमा सहयोग को लागी प्रवासी श्रमिक युनियन ( MTU ) सम्पर्क गर्नु पर्छ ।
रोजगारदाता ले ले देखाउने क्षणिक प्रलोभन मा परेर धेरै प्रवासी श्रमिक ले आफै औद्योगिक दुर्घटना बाट उपचार नगराए का केस पनि काम गर्दा औद्योगिक दुर्घटना भएमा अनिवार्य औद्योगिक दुर्घटना बाट उपचार गर्नु पर्छ कोरिया मा काम गर्दा चोटपटक लागेमा भिसा हुने नहुने सबै प्रवासी श्रमिक ले सान्जे मार्फत उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
कोरियामा सबै अधिकार रोजगारदाता लाई दिइएका कारण कति प्रवासी श्रमिक औद्योगिक दुर्घटना हुदा दुर्घटना बिमा मार्फत उपचार गराउन सकिराखेका हुदैन किनकि रोजगारदाताले औद्योगिक दुर्घटना बाट उपचार गराएको खण्डमा ३ बर्ष पछि को बोनस भिषा नलगाई दिने कमिटेड कामदार को रुपमा न ल्याई दिने अनेकौ डर त्रास देखाई राखेको हुन्छ ।कोरिया मा कार्यरत सबै प्रवासी श्रमिक आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्न को लागी सङ्घर्ष गर्न प्रवासी श्रमिक युनियन को सदस्य बनि प्रवासी श्रमिक युनियन ले आव्हान गर्ने बिभिन्न कार्यक्रम मा एकजुट भएर सहभागी हुन नितान्त जरुरी छ ।लेखक – मधुसुदन ओझा
कोरियन एयरमा फेस मास्क अनिवार्य